Andriamanitra - fampidirana | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ho antsika Kristiana, ny finoana fototra indrindra dia ny fisian'Andriamanitra. Amin'ny alalàn'ny "Andriamanitra" - tsy misy lahatsoratra na fanampiny fanampiny - dia Andriamanitry ny Baiboly no tianay holazaina. Fanahy fanahy mahery sy mahery izay namorona ny zava-drehetra, iza no miahy antsika, miahy ny fihetsitsika, miasa ao amin'ny fiainantsika ary manolotra antsika mandrakizay miaraka amin'ny fahatsarany. Tsy afaka mahatakatra an Andriamanitra amin'ny fitambarany ny olombelona. Saingy afaka manomboka isika: Azontsika atao ny manangona volavola fahalalana an'Andriamanitra mba hahafantarantsika ny tena mampiavaka ny sariny ary hanome antsika teboka voalohany hanombohana ny fahalalana hoe iza Andriamanitra ary inona no ataony amin'ny fiainantsika. Andeha isika hibanjina ny toetran'Andriamanitra izay mety hahitan'ny mpino vaovao, ohatra, fa manampy azy manokana.
Betsaka ny olona - ao anatin'izany ny mpino efa ela - no maniry porofo fa misy Andriamanitra. Saingy tsy misy porofo avy amin'Andriamanitra manome fahafaham-po ny rehetra. Tsara kokoa angamba ny miresaka porofo miseho amin'ny tranga misy fa tsy porofo. Ny porofo dia manome antsika antoka fa misy Andriamanitra ary ny votoatiny dia mifanaraka amin'izay lazain'ny Baiboly momba azy. Andriamanitra "tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona", hoy i Paoly tamin'ny jentilisa tao Lystra (Asan’ny Apostoly 14,17). Ny fijoroana ho vavolombelona - inona izany?
zavaboary : Hoy ny Salamo 19,1: 1,20: «Ny lanitra milaza ny voninahitr'Andriamanitra ...» ao amin'ny Romana dia milaza hoe:
tsy tapaka: Ny famoronana dia mampiseho famantarana ny filaminana, amin'ny lalàna momba ny vatana. Raha toa ka tsy dia misy firy ny zavatra fototra iainana, raha tsy misy ny tany, dia tsy misy olona. Raha samy manana ny habeny na ny orbit hafa ny tany, ny toe-piainana eto an-tany dia tsy mamela ny ain'ny olona. Ny sasany dia mihevitra an'io ho kisendrasendra fotsiny; ny hafa kosa dia mihevitra kokoa fa hazavaina hoe ny rafi-masoandro dia novolavolain'ny mpamorona marani-tsaina.
fiainana: Ny fiainana dia mifototra amin'ny akora sy fihetseham-po mihetsika simika be pitsiny. Ny sasany dia mihevitra ny fiainana ho "tonga saina"; Ny hafa dia mihevitra azy io ho kisendrasendra. Misy ny mino fa hanaporofo ny fiandohan'ny fiainana "tsy misy Andriamanitra" ny siansa. Ho an'ny olona maro, na izany aza, ny fisian'ny aina dia mampiseho ny andriamanitra mpamorona.
Man: Ny olona dia manana fandinihan-tena. Mandinika an'izao rehetra izao izy, mieritreritra momba ny dikan'ny fiainana, amin'ny ankapobeny dia afaka mitady dikany. Ny hanoanana ara-batana dia manondro ny fisian'ny sakafo; Nangetaheta ny zavatra iray fa misy zavatra ahafahana mamono io hetaheta io. Ny faniriantsika ara-panahy ve dia midika fa misy ny dikany ary mety ho hita? Betsaka ny olona milaza fa nahita ny hevitry ny fifandraisany amin'Andriamanitra.
Fitondran-tena [etika]: Mety sy diso ve izany sa resaka hevitra fotsiny sa fanontanian'ny hevitry ny maro an'isa, sa misy manam-pahefana ambonin'olombelona izay mihevitra ny tsara sy ratsy? Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy manana antony hiantsoana zavatra ratsy ny olombelona, ​​tsy misy antony hanamelohana ny fanavakavaham-pirazanana, ny fandripahan'olona, ​​ny fampijaliana ary ny habibiana mitovy amin'izany. Ny fisian'ny faharatsiana noho izany dia manondro fa misy Andriamanitra. Raha tsy misy izany dia tsy maintsy manjaka ny fahefana madio. Ny antony dia milaza ny finoana an'Andriamanitra.
Mamaly ny famindram-pony isika; noho ny famindram-pony tamim-pahatokiana; amin'ny azy
Fahasoavana amin'ny fitiavantsika. Misaotra azy isika, midera azy, manolotra azy amin'ny faniriana hananana bebe kokoa. Raha nasehony antsika ny fitiavany dia avelao izy hanova antsika ka tiantsika ny olona manodidina antsika. Ampiasao ny zavatra rehetra ananantsika, dia ny zava-drehetra
inona isika, ny zavatra rehetra omeny antsika hanompo ny hafa amin'ny alàlan'i Jesosy ohatra.